Madaxweyne farmaajo oo booqasho deg deg ah ku tegay Ereteriya - Awdinle Online
Madaxweyne farmaajo oo booqasho deg deg ah ku tegay Ereteriya
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 24-ki Saacadood ee la soo dhaafau ku sugnaa dalka Koonfurta Suudaan ayaa booqasho deg deg ah ku tegay dalka Ereteriya.
Garoonka Diyaaradaha magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa waxaa Madaxweyne Farmaajo kusoo dhaweeyay dhiggiisa dalkaasi Ereteriya Isaias Afwerki, iyad aoo la geeyay Xarunta Madaxtooyada dalkaasi.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa shalay tegay Caasimadda Koonfurta Suudaana ee Jubba, isaga oo halkaasi kaag qeyb-galay munaasabadda Dhaqan-gelinta Heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya Dowladda Suudaan iyo Kooxaha hubeysan ee Galbeedka iyo Koonfurta.
Booqashada uu Madaxweyen farmaajo ku tagay dalka Ereteriya ayaa waxaa ay noqoneysaa markii Saddexaad,waxaana horaantii Bishii Janaayo booqasho uu ku tegay dalkaasi uu ka qeyb qaatay ka miro-dhalka tallaabooyinka isu furfurnaanta dhanka diblumaasiyadda iyo isu-socodka bulshada Gobolka.
Previous articlePuntland oo dowladda Federaalka ku eedeeysay sicir bararka ka jira…
Next articleCiidamada AMISOM oo isaga baxay saldhigyo ay ku lahaayeen Shabeellaha Hoose